Mkparịta ụka - ọgwụgwọ n'ụlọ
Mgbe isi na ihe siri ike jikọtara, ụbụrụ na-enwekwa mmebi site n'ịkụda mgbidi nke ikuku nke si n'ime. N'ihi mmerụ dị otú ahụ, enwere ọkpụkpụ nke anụ ahụ dị nro, mmebi nke ọtụtụ n'ime ọrụ ndị dị mkpa nke ngwa ahụ na mmebiwanye nke mgbasa. Nchikota nsogbu ndia bu ihe ngbagha - nlekota nke ulo nke ihe omuma a puru ime, ma obu mgbe emesiri nyocha nke oma na ikike nke dibia.
Nyere aka n 'ulo
N'agbanyeghị ike nke ọrịa strok ahụ na oke mgbaàmà nke ụbụrụ na-emebi, ọ dị mkpa ịkpọ oku otu ọkachamara ngwa ngwa ma rụọ ọrụ ndị a:
Iji nyochaa mmadụ maka ọnyá ọgbụgba ọbara, ọ bụrụ na ọ bụla, ịkwesịrị ilekọta ha ma gbanye ha.
Nyere onye ahu aka ka o dina ala (oburu na o ma ama), buru isi.
Ekwela ka onye ọrịa daa ụra ma ọ dịkarịa ala 40-60 nkeji, ọkacha mma tupu ịbịa ndị ọrụ ahụ ike. O nweghi ike ibili, jee ije ma gbasaa.
Tinye ihe nkedo nke ice na isi gi ma obu ihe di oyi.
Ọ bụrụ na mmadụ amaghị ihe ọ bụla, gbanye ya n'akụkụ aka nri, chee ihu na ala ma ọ bụ n'ala, ma burughachi ya. Akuku ekpe ga-ehulata n'akụkụ aka nri.
Ọ dị mkpa ka a kpọga onye ahụ na-aga n'ụlọ ọgwụ ma nyochaa:
X-ray nke okpokoro isi na olu;
encephalography, ụbụrụ echoencephalography;
lelee ọnọdụ nke fundus;
kọmputa ma ọ bụ ihe ntanetị mbido.
Naanị ihe ọmụmụ ihe na-eme ka anyị nweta nkwubi okwu banyere oke nbibi ahụ. Ma ọ bụghị ya, ọ dị mfe ịghara ịhụ mmechi siri ike, n'ihi na nhụsianya nke trauma a na-atụle bụ na ihe mgbaàmà ya na-egosipụtakarị n'oge na-adịghị anya.
Ọ bụrụ na mmebi ahụ adịghị ike, ndị dọkịta anaghị ajụ ụlọ ọgwụ. Ma n'ọnọdụ ndị dị otú a, ọ dị mkpa ịgbaso ntuziaka nke ọkachamara ma gaa nyocha nyocha.
Ọgwụgwọ nke ụbụrụ nta nke ụbụrụ n'ụlọ
Maka mgbake na ngwa ngwa ị ga - achọ:
Maka ma ọ dịkarịa ala ụbọchị 3 nọrọ na udo zuru oke - echela TV, anaghị eji kọmpụta, ama ama ma ọ bụ mbadamba, agụghị na ọbụna obere mkparịta ụka. A na-ekwe ka naanị gee egwu na-ege ntị, ma ọ bụghị na ekweisi.
Hụ na ihe ndina ahụ ga-ezu ike ma ọ dịkarịa ala awa 72, dịka - 5 ụbọchị. Ụra ruo ogologo oge, ọ bụghị ihe na-erughị awa 9-10.
Zere mmetụta ọ bụla, ihe mgbagwoju anya, gụnyere ihe ndị dị mma.
Adịnyela ọkụ na-enwu gbaa n'ime ụlọ ahụ, n'ụbọchị anwụ na-acha, na-ekpuchi windo na ákwà ngebichi, na-ekepụta ọchịchịrị.
Na-etinye aka na mmiri ara ehi na ihe oriri, na-egbochi njiri nnu.
Ọ bụrụ na ịghara ileghara ndụmọdụ ndị e depụtara anya, ọganihu nke ọnọdụ zuru ụwa ọnụ ga-abịa n'ime ụbọchị 2-3, otu izu ka e mesịrị, ala ahụike na-abịa kpamkpam.
Kedu ka esi gwọọ mkparịta ụka n'ụlọ?
Dị ka ọ dị, na mgbakwunye na nri na nri, ị chọrọ ọgwụ dị iche iche. Ọ dị mkpa na ndị ọkachamara họpụtara ha, nhọrọ nke onwe ha nke ọbụla na mba mba dị ize ndụ.
N'iji usoro a na-eji agwọ ọrịa n'ụlọ, a na-eji ọgwụ ọjọọ na ọgwụ ọjọọ eme ihe:
1. Ndị na-agba ume:
2. Na-ada ụda:
tincture nke motherwort, valerian;
3. Imegide aghara aghara:
4. Ndị na-akụda mmụọ:
5. Nri ụra:
9. Imegide asthenia:
mpi nke magnolia osisi vaịn, ginseng, arnica;
tincture nke Eleutherococcus;
Atony nke eriri afọ
Bend nke gallbladder
Myositis n'olu akwara
Mkpịsị aka na ogwe aka na-emerụ ahụ
Nkwụsị ụkọ nke ụbụrụ
Ụdị hypertensive VSD
Ude maka nkwonkwo
Ala okpomọkụ na-akpata
Revalgine - akara maka iji
Ọkụ na imi
Mbadamba ụda na ntị na isi
Hernia nke esophagus - mgbaàmà na ọgwụgwọ
Ketanov si eze mgbu
Ọ bụ di di ya gbara alụkwaghịm
Kedu otu esi ahọrọ uwe mkpuchi site na akpa ákwà?
Alycha - ọma na ihe ọjọọ
Okpokọta nke okenye - mgbaàmà
Ihe oriri hypoallergenic maka ndị na-enye nwa ara
Hedgehogs ke utoojoo ude ihendori na oven
Utu Crunchy na vodka
Treptow Park na Berlin
Elton John ekweghị ka ọ kwuo okwu mgbe a na-agba Donald Trump
Ụmụ nwanyị akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ
Rhodesian ridgeback - àgwà nke ụdị
Karịa na-eme ka a na-agba ya ọgwụ?
Kedu ka esi mee okooko osisi?
Nri Buckwheat na ọkụkọ
Ọkụ dị ala n'ime ụmụ nwanyị
Buckwheat na imeju
Echiche na mmepụta ihe
Akpụkpọ anụ na nwamba
Chandelier na-akwalite - nke nhọrọ kacha mma maka nwa gị?